Blockchain News 12 EyoMqungu 2018 - Blockchain News
EyoMqungu 12, 2018 admin
ulungiselelo lwe-enjini yokukhangela Chinese Baidu iqala iqonga Blockchain-as-a-nkonzo
Chinese giant web uphendlo Baidu isungulelwe yayo blockchain-as-a-nkonzo (uBaas) platform.
Ngokusekelwe kwezobuchwepheshe eziphuhliswe Baidu, neqonga evulekileyo thaca ukunika kakhulu “isebenziseka kakuhle” inkonzo blockchain.
Ngokutsho website siqinise abazahluleleyo, “Baidu Trust” ivumela ukuqhutywa ze ukope iintengiselwano, kwaye isetyenziswe kwiimeko ezahlukeneyo usebenzisa, kubandakanya imali digital, lokuhambisa digital, ulawulo bank credit, ulawulo-inshorensi lokuhlola iincwadi, kunye nokuninzi.
Iifom urhulumente US iqela ukusebenza sigxile cryptocurrencies
US Treasury uNobhala Steven Mnuchin ngoLwesihlanu ukuba Financial Stability Oversight Council, iqumrhu likarhulumente oluvavanya ubungozi inkqubo zemali, kuye kwasekwa iqela ukusebenza sigxile cryptocurrencies.
Mnuchin zaphawula ngenkqubo ngexesha nokuvela I-Economic Club e Washington, D.C. emva kokuba ebuzwa malunga isihloko bitcoin.
“Sigxile kakhulu kwi cryptocurrencies,” Mnuchin wachaza, ngokwalatha iingxoxo namanye nabalawuli ngaphakathi U.S. urhulumente yaye kamva echaza: “Sifuna ukuqiniseka ukuba abantu ababi abakwazi ukusebenzisa ezi iimali ukuba benze izinto ezimbi.”
Mnuchin wongezelela ukuba umba nguye U.S. urhulumente co- neqela ngamazwe G-20 kwakunye.
Mnuchin wabuzwa ukuba Federal Reserve kungenzeka ukuphuhlisa version yayo digital of eyake lwemali.
“I-Fed kwaye Andiqondi ukuba kukho imfuneko ukuba ngelo xesha,” Mnuchin uthe.
ERashiya Sberbank ibhengeza lab blockchain
Sberbank, yenye yeebhanki ezinkulu Russia, ubhengeze ilebhu blockchain ukuphuhlisa izisombululo blockchain-based uvavanyo.
I ilebhu entsha ijolise ukwenza AMAGQABAZA ▸ imveliso, enze iimvavanyo pilot kwaye uyisebenzise izisombululo zoshishino blockchain-based for Sberbank Group, umbiko uthi.
Ngokutsho ku Igor Bulantsev, nomsizi kamongameli Sberbank kaThixo, blockchain ingaluncedo “zitshintsha” imarike ishishini zezimali, kwakunye nemisebenzi ibhanki kunye neenkonzo.
Blockchain bill yogesi ecetywayo Tennessee
UMniki e Tennessee iye amaphepha bill omtsha enakana lotyikityo blockchain iirekhodi ezisemthethweni electronic, uphawu umgudu yakutshanje lowiso ukwenza njalo kwiiveki nje.
Ityala, ingeniswe Tennessee House of Representatives ngu mthetho karhulumente Jason Powell ku Jan. 10, ucula iziqwenga efanayo yemithetho kwafakwa eFlorida Nebraska.
Kodwa njengokuba imigudu eFlorida and Nebraska, ihlala ukuze kubonwe ukuba ezinye abo aya kusabela njengoko amanyathelo ukuhamba ngapha inkqubo mpikiswano.
ibhanki Online Swissquote landa Outlook nzuzo ngayo kaThixo ngenxa Bitcoin trading
ibhanki Online Swissquote ehlaziyiweyo Outlook yayo ingeniso ngenxa 2017, akuba wangenelwa zorhwebo enamandla cryptocurrencies. Le nkampani iye unomsebenzi wenzala urhwebo bitcoin.
Ndlala-based Swissquote ulindele imivuzo ukuba baye baba ngu 186 million franc Swiss ku 2018, 8 million ngaphezu kokuba kuqikelelo lwemozulu kwi ngumlomo entsha kakhulu. Ibhanki wathi iza kukuthumela inzuzo pretax malunga 45 million franc, ngokutsho lisola namhlanje.
Ukwanda elibukhali Iholo ingeniso nokukhula yaba ngenxa yeemeko ezimbini, Swissquote uthe.
Abathengi wasebenza ngaphezulu kakhulu nezibambiso nokutshintshiselana angaphandle, ngelixa le nkampani kwakhona yazuza kwintshayelelo borhwebo cryptocurrency.
Swissquote waba ibhanki lokuqala online zaseYurophu ukuze asungule mnikelo ngoJulayi, 2017.
YaseJapan DMM Group ebahlasela Bitcoin exchange
DMM Group, inkampani eCommerce kunye zime Internet Japan-based uqala otshintshiselwano amatsha ebizwa DMM Bitcoin.
Le nkampani uceba nomnikelo 24/7 uxhaso lwabathengi, yaye sithetha nje kulawulwa Bitcoin Exchange entsha Japan.
Ingabinani ke ngokusemthethweni njenge 'lwemali umrhwebi virtual’ kwi Japanese Finance Bureau
Ngoku AMP ajoyine iqela myri ...
Post Previous:Bitcoin Hardforks yintoni na?
Post Next:Blockchain News 13 EyoMqungu 2018